Ukuqhelaniswa kwabafundi abatsha »IYunivesithi yaseHodges
Wamkelekile kwiYunivesithi yaseHodges!
UkuQhelaniswa kwabafundi eNtsha yeYunivesithi yaseHodges (NSO) inceda iiHodges 'Hawks zethu ukulungiselela amava akho okufunda!
Amaqhosha angezantsi aya kukukhokela kule nkqubo kwaye anikezele ngolwazi olubalulekileyo malunga neYunivesithi yethu. Qalisa ngoku kwaye uphinde utyelele nanini na ufuna uncedo.
Umyalezo ovela kuMongameli uGqirha Meyer
IYunivesithi yaseHodges-iziko labucala elingenzi nzuzo -lungiselela abafundi ukuba baphakamise imfundo ephakamileyo kwimisebenzi yabo yobuqu, yobungcali kunye neyasekuhlaleni.
Ukuze ufunde okungakumbi malunga nokuba kutheni iYunivesithi yaseHodges iyunivesithi eyahlukileyo kumazantsi mpuma eFlorida, cofa Apha.
Yazi ikhampasi yakho
Yazi iCampus yethu
Isakhiwo sase-Fort Myers Campus U kunye no-H
Ukwakhiwa kweKhampasi yaseFort Myers U
Uncedo lwezeMali kunye neeAkhawunti zabafundi
Iinkonzo zabafundi, uMgcini zincwadi zobhaliso, kunye noKwamkelwa
Ukwakhiwa kweSayensi yezeMpilo eManyeneyo-U
Bhalisa kwi-Intanethi Ngokuzenzela iNkonzo!
Ukuzenzela inkonzo ngokwakho kukuvumela ukuba ubhalise okanye ucele ukubhaliswa kuyo nayiphi na ikhosi kwiseshoni ezayo, 24/7, 100% kwi-Intanethi:
Ngena kwi myHUgo
Ngaphantsi kwecandelo le-HU Self-Service, cofa ku Bhaliso kunye noCwangciso lweDigri
Ukuqinisekisa ishedyuli yekhosi yakho, cofa kwiSicwangciso kunye neShedyuli
I-MyHUgo kunye ne-HU yokuzenzela inkonzo
I-MyHUgo yiYunivesithi yaseHodges ye-portal yeenkonzo zabafundi kwi-Intanethi apho bonke abafundi banokufikelela ngokukhawuleza kwi-HU Self-Service. Nge-myHUgo, unokufikelela kulwazi lwakho kunye nokuqhuba ishishini lakho kwiYunivesithi kwi-intanethi.
Xa ungena kwi-portal MyHUgo ikhonkco kwi-imeyile yakho livela kwiphepha eliphambili. IiHodges ziya kusebenzisa iakhawunti yakho ye-imeyile yabafundi njengeendlela ezisemthethweni zokunxibelelana nawe.
I-Canvas yiNkqubo yokuLawulwa kokuFunda kwiYunivesithi yaseHodges, apho abafundisi kunye nabafundi banakho ukufikelela kwimathiriyeli yezifundo, ukuhambisa izabelo, ukunxibelelana kunye nokusebenzisana kwi-Intanethi.
Izixhobo ezongezelelweyo kunye neNkxaso
IYunivesithi yaseHodges ineqela le-IT elizinikeleyo lokunceda abafundi ngemicimbi eyahlukeneyo yezobuchwepheshe abanokuba nayo. Abafundi banokungenisa kunye nokulandela umkhondo wesicelo senkxaso yetekhnoloji kwi-intanethi, kunye nokukhangela iingxaki zokuzinceda kunye nendlela yolwazi. Abafundi baya kusebenzisa idilesi ye-imeyile yeHodges kunye negama lokugqitha ukuze bangene.
Inkxaso ye-Desk yeNkxaso yeDesika
Izixhobo Zamathala Eencwadi
Oononcwadi balapha ukukunceda ukhethe kwaye ufumane izixhobo. Nokuba ufuna uncedo ekukhangekeni kwindawo yolwazi yethala leencwadi okanye ujikeleze incwadana ye-APA, abasebenzi bamathala eencwadi bayafumaneka ngokobuqu, ngefowuni okanye nge-imeyile.
Incwadi yesikhokelo yabafundi iya kusebenza njengesikhokelo xa uqala kwaye uqhubeka nomsebenzi wokufunda kwiYunivesithi yaseHodges.
Ikhathalogu yaseyunivesithi iya kusebenza njengesikhokelo semigaqo-nkqubo yezemfundo ekhethekileyo kwiinkqubo zemfundo zeYunivesithi yaseHodges.
Imigaqo kunye neMiqathango yoBhaliso
Imigaqo kunye neemeko zobhaliso zibonelela ngesivumelwano phakathi komfundi neYunivesithi kuzo zonke iinjongo zobhaliso.
Iphepha lezixhobo zabafundi
Iphepha lezixhobo zabafundi liyafumaneka kubo bonke abafundi apho uya kufumana isilabhasi yezifundo, iiyure zeofisi yecandelo, upapasho kunye nolwazi lokunxibelelana namanye amasebe eyunivesithi. Abafundi banokufikelela kweli phepha ngokungena kwi-MyHUgo.
Ikhasi leZibonelelo zabafundi
Iipakethi zoNcedo lwezeMali
Iphakheji yoncedo lwezezimali inokuba nenhlanganisela yezibonelelo, iimali mboleko kunye / okanye inkxaso-mali yokufunda. Ukufunyanwa kwala mabhaso kuxhomekeke kwinqanaba leemali ezikhoyo kunye nokufaneleka kwakho njengoko kumiselwe sisicelo saSimahla seFederal Student Aid (FAFSA).
Iqela leeAkhawunti zabafundi linokunceda ekubizeni, ukuqonda izifundo kunye nemirhumo, ukuseta izicwangciso zokuhlawula, kunye nokunye.
IYunivesithi yaseHodges ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokuhlawula isicwangciso sokuhlawula iifizi kunye nemirhumo ngezavenge zenyanga ngeseshoni. Ngolwazi oluthe kratya, abafundi banokungena kwi-MyHUgo yabo kwaye baye Ulwazi lweAkhawunti yoMfundi.
IYunivesithi yaseHodges isebenzisane neBankMobile ukubonelela ngeendlela ezininzi kunye nokufikelela ngokukhawuleza kwimbuyekezo yakho.
IiNkonzo zoMkhosi nezamaGqala
KwiYunivesithi yaseHodges, uyakufumanisa ukuba ukuba ngumhlobo woMkhosi ayisiyonto nje siyithethayo, linqanaba lenkxaso eliya ngaphaya kweklasi.
IOfisi yethu yamava abafundi inikezele ngabacebisi babafundi abalapha ukunceda abafundi baphuhlise izicwangciso zemfundo zexesha elide kunye nokuseta iinjongo zexesha elifutshane ukufezekisa ezo zicwangciso.
Fowunela ukucebisa ngezifundo kwi-800-466-0019
Ukucebisa ngezeMfundo nge-imeyile
IiNkonzo zoMsebenzi sisixhobo sasimahla sabafundi kunye nabalumkileyo ukuba bafunde ngakumbi ngamakhondo emisebenzi abakhethiweyo kunye nokuphuhlisa izicwangciso zomsebenzi.
IYunivesithi yaseHodges ixhasa ngokubonakalayo amalungelo abafundi abakhubazekileyo ukuba babe nokufikelela ngokulinganayo kwimfundo.
IYunivesithi yaseHodges izimisele ukudala nokugcina indawo yokufunda apho bonke abantu abathatha inxaxheba kwimisebenzi yeYunivesithi banokufunda kunye kwimeko engenazo zonke iintlobo zokuhlukumeza, ukuxhaphaza, umkhethe, ucalucalulo okanye ukoyikisa.
Amalungelo abucala (FERPA)
Ngaphantsi kwezikhokelo ze-FERPA, abafundi banelungelo (1) lokuhlola nokuphonononga irekhodi labo labafundi, (2) ukufuna izilungiso kwiirekhodi, (3) imvume yokuxelwa, kunye (4) nokufaka isikhalazo.
IOfisi yeYunivesithi yaseHodges yoKhuseleko lweCampus ibeka phambili ukhuseleko lwabafundi ngalo naliphi na ixesha apho ikhampasi ivulekile.
Siyavuyisana nawe, ulugqibile uQeqesho olutsha lwabafundi!
Enkosi ngokuthatha ixesha lokuba uqhelane neYunivesithi yaseHodges kunye nesebe lenkxaso yabafundi elifumanekayo kubo bonke abafundi. Njengomfundi, uya kuba nakho ukufikelela kule ndawo kuyo yonke imisebenzi yakho eHodges. Asinakulinda ukukubona udlula kwinqanaba xa lithuba lakho lokuphumelela!
Ngoku uyiHawk. Jonga indawo!
Ungabonisa ikratshi lesikolo sakho ngokuthenga kwi-Intanethi Ivenkile yeeHawks. Uya kufumana izinto ezahlukeneyo onokuzisebenzisa, ukusuka kwiidrive drive kunye neetumbler ukuya empahleni, kunye neHodges Hawk! Yintoni eyenza ivenkile yethu yahluke? Kuko konke ukuthengwa okwenziweyo, inxenye yengeniso iya kwiHawks Scholarship Fund.